I-Airbus: Uphononongo olutsha lwe-100% lokukhutshwa kwamafutha ezithuthi lubonisa isithembiso sakwangoko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Airbus: Uphononongo olutsha lwe-100% lokukhutshwa kwamafutha ezithuthi lubonisa isithembiso sakwangoko
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iziphumo zokuqala ezivela kuphononongo lokuqala lwehlabathi lwempembelelo ye-100% yamafutha eenqwelomoya azinzileyo (SAF) kuzo zombini iinjini zejethi yorhwebo zibonelele ngeziphumo ezithembisayo zakwangoko.
Uphononongo lwe-ECLIF3, olubandakanya Airbus, I-Rolls-Royce, iziko lophando laseJamani i-DLR kunye nomvelisi we-SAF u-Neste, uphawula okokuqala i-100% SAF ilinganiswe ngaxeshanye kuzo zombini iinjini zeenqwelo-moya zabahambi zorhwebo - i-Airbus A350 Inqwelomoya inikwe iinjini zeRolls-Royce Trent XWB.
Iimvavanyo zokukhutshwa kwe-in-flight kunye novavanyo oluhambelanayo lomhlaba kwiprogram ye-ECLIF3 yaqala ekuqaleni kwalo nyaka kwaye isanda kuqalisa kwakhona. Iqela lezifundo ezahlukeneyo, elikwabandakanya abaphandi abavela kwiBhunga loPhando leSizwe laseCanada kunye neYunivesithi yaseManchester, liceba ukupapasha iziphumo zalo kwiijenali zemfundo ekupheleni konyaka ozayo kunye no-2023.
Iziphumo zolu phando ziya kuxhasa iinzame eziqhubekayo kwi-Airbus kunye ne-Rolls-Royce zokuqinisekisa ukuba icandelo lezomoya lilungele ukusetyenziswa kwe-SAF enkulu njengenxalenye yenyathelo elibanzi lokukhupha i-decarbonize kwishishini. Iinqwelomoya okwangoku zivunyelwe kuphela ukusebenza kumdibaniso wama-50% we-SAF kunye namafutha ejethi eqhelekileyo, kodwa zombini iinkampani zixhasa iphulo lokuqinisekisa ukusetyenziswa kwe-100% ye-SAF.
Ngo-Epreli, i A350 ibhabha iinqwelomoya ezintathu phezu koLwandle lweMeditera elandelwa yinqwelomoya ye-DLR Falcon eleqayo ukuthelekisa ukukhutshwa kwenqwelomoya kuzo zombini i-kerosene kunye ne-Neste's hydro-processed esters kunye ne-fatty acids (HEFA) amafutha azinzileyo. Iqela likwaqhube iimvavanyo zokuthobela lisebenzisa i-100% ye-SAF kwaye akukho miba yokusebenza ifunyenweyo.
Iimvavanyo zokukhutshwa kweenqwelo moya zisebenzisa i-100% ye-SAF kunye ne-HEFA/Jet A-1 umxube wamafutha uqalise kwakhona kule nyanga, ngelixa uvavanyo lokukhutshwa kwezinto ezikhutshwa phantsi komhlaba ukulinganisa iinzuzo ze-SAF kumgangatho womoya wendawo nazo zenziwa. Iqela lophando lifumene i-SAF ikhupha ii-particulates ezimbalwa kune-kerosene eqhelekileyo kuzo zonke iimeko zokusebenza kwe-injini evavanyiweyo, ebonisa ukuba kunokwenzeka ukunciphisa impembelelo yemozulu kunye nokuphuculwa komgangatho womoya malunga neenqwelo-moya.
Ukongeza, i-SAF inoxinaniso olusezantsi kodwa umthamo wamandla aphezulu ngekhilogram yepetroli xa kuthelekiswa nekerosene eqhelekileyo, ezisa ezinye iinzuzo zokusebenzisa amafutha enqwelomoya ngenxa yokutshiswa kwamafutha aphantsi kunye nobunzima obuncinci bepetroli ukukhwela ukufezekisa uthumo olufanayo. Uhlalutyo oluneenkcukacha lweqela luyaqhubeka.
"Iinjini kunye neenkqubo zamafutha ziyakwazi ukuvavanywa emhlabeni kodwa indlela yodwa yokuqokelela isethi epheleleyo yedatha ekhutshwayo efunekayo ukuze le nkqubo iphumelele kukuqhuba inqwelomoya kwiimeko zangempela," watsho uSteven Le Moing, uMphathi weNkqubo yaMandla amatsha. Airbus. “Uvavanyo lwenqwelomoya ye A350 inikeza inzuzo yokubonisa ukukhutshwa kwe-injini ngokuthe ngqo kunye nokungathanga ngqo, kubandakanywa namalungu avela emva kwenqwelomoya kwindawo ephakamileyo. "
USimon Burr, uMlawuli weRolls-Royce woPhuhliso lweMveliso kunye neTekhnoloji, i-Civil Aerospace, uthe: "Olu phando longeza kuvavanyo esele silwenzile kwiinjini zethu, emhlabeni nasemoyeni, ezingakhange zifumane mqobo wobunjineli. iinjini zethu zisebenza 100% SAF. Ukuba siza kuphelisa ngokwenene ikhabhoni yokuhamba ngenqwelomoya okude, ke i-100% ye-SAF yinto ebalulekileyo kwaye sizimisele ukuxhasa isatifikethi sayo senkonzo. ”
Inqwelomoya ye-DLR Falcon chaser ixhotyiswe ngeeprobe ezininzi zokulinganisa ukukhutshwa kwinqanaba lokuhamba ngenqanawa ukuya kumgama oziimitha ezili-100 kuphela ukusuka kwi-A350 kwaye izondle kwisixhobo senzululwazi ukuze sihlalutywe.
"I-SAF ibonakaliswe ukuba inomgangatho ophantsi kakhulu wekhabhoni kumjikelo wobomi bayo xa kuthelekiswa ne-jet fuel eqhelekileyo kwaye ngoku siyibona iluncedo ekunciphiseni i-non-CO.2 iziphumo nazo,” utshilo uMarkus Fischer, iLungu leBhodi yeCandelo le-DLR leAeronautics. “Uvavanyo olufana nolu luqhubela phambili nokuphuhlisa ukuqonda kwethu i-100% ye-SAF, ukusetyenziswa kwayo kwinqwelomoya kwaye sibona iimpawu ezintle zokubanakho ukuthomalalisa imozulu. Sijonge phambili ekufundeni idatha kuthotho lwesibini lweenqwelomoya ze-ECLIF3, eziqale ngokutsha ngenqwelomoya yokuleqa ngaphezulu kweMeditera ekuqaleni kwale nyanga. "
Kwi-2015, i-DLR yenza umkhankaso we-ECLIF1, iphanda ezinye iifutha kunye ne-Falcon kunye ne-A320 ATRA yophando lweenqwelo-moya. Olu phando lwaqhubeka ngo-2018 kunye nephulo le-ECLIF2 elibone i-A320 ATRA ibhabha kunye nomxube wamafutha e-jet aqhelekileyo kunye ne-50% HEFA. Olu phando lubonise ukusebenza kakuhle kokukhutshwa kwemixube yamafutha ukuya kuthi ga kwi-50% ye-SAF kwaye yavula indlela ye-100% yeenqwelomoya zovavanyo lwe-SAF ze-ECLIF3.